Tale Jeneralin'ny teknolojia Nanoradar Zhou Quentin: serivisy fandefasana radara onjam-peo 24GHz amin'ny tsena efatra lehibe kendren'ny News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.
Tale Jeneralin'ny teknolojia Nanoradar, Zhou Quentin: serivisy fandefasana radara mikraoba milimetatra 24GHz amin'ny tsena efatra lehibe kendrena
Fotoana: 2017-11-09 Hits: 23
Natonta pirinty: mpankafy elektronika
【REVIEW】 Nanoradar Technology dia natsangana tamin'ny taona 2012, tao anatin'ny 5 taona ity orinasa ity nanomboka ny famolavolana antena ka hatramin'ny vokatra milimetatra onjampeo, dia niaina fihodinana maro koa ny fizotrany, tamin'ny alàlan'ny lalan-kely maro. Andriamatoa Zhou Quentin, tale jeneralin'ny Nanoradar Technology dia nilaza fa tato anatin'izay taona lasa izay, Nanoradar dia nahavita fandrosoana lehibe teo amin'ny teknolojia sy ny fanitarana ny tsena. Ny radar-onjam-milimetatra 24GHz dia niseho tamin'ny famatsian-volume. Mpanjifa mihoatra ny 150 amin'ny firenena 10 manerantany no mampiasa ny vokariny. Nasongadiny fa misy tombony lehibe amin'ny teknolojia Nanoradar amin'ny fanaovana radar milimetatra, izay hahatsapa ny fanaingoana ny algorithma sy ny masontsivana.
Raha ny fanadihadiana natao nataon'ny masoivohon'ny indostria anatiny dia manodidina ny 2014 tapitrisa ny volan'ny varotra an-trano an'ny radar millimeter-automotive automatique tamin'ny 1.2 ary 2015 tapitrisa teo ho eo ny 1.8. Ny fampiharana lehibe indrindra dia ny radara lavitra (24GHz) ho an'ny detection blind spot sy ny fampahatsiahivana amin'ny fiara aoriana, roa isaky ny fiara. Amin'ny taona 2020, raha toa ka ny 15% -n'ny fiara mivarotra milimetatra-onjam-peo mivarotra varotra any Shina, avy eo nivory 2 isaky ny fiara, dia andrasana ny fangatahana radar milimetatra amin'ny 2020 amin'ny $ 9 tapitrisa, taha-pivoarana maharitra dimy taona eo ho eo amin'ny 50% ho avy. . Ao amin'ny tsena elektronika mandeha fiara mitombo haingana dia haingana, ny orinasa vahiny dia nanao ampihimamba ny tsena avo lenta, raha ny fanakanana ny teknolojia fandrosoana kosa dia niditra tamin'ny sehatry ny fisian'i Shina tena sarobidy.
Ny tarika radar milimetatra-onja mahazatra any an-toerana sy any ivelany dia 24GHz (ho an'ny radara fohy sy salantsalany, 15-70m) ary 77GHz (ho an'ny radara lava, 100-200m). Amin'izao fotoana izao, ny radar-onja-milimetatra 77GHz dia ampihimamba amin'ny mpanamboatra vahiny, Bosch, Continental, Delphi, Denso, TRW, Fujitsu no mpamatsy vola eran-tany. Ny radara onjam-milimetatra 24GHz ao an-toerana, vokatra matotra kokoa ankehitriny dia misy ny nanoradar Technology sy Xiamen imsemiand orinasa hafa 24GHz radar fohy sy chips eo anelanelany.
Nanoradar Technology dia natsangana tamin'ny 2012 ary efa ho dimy taona izao, manomboka amin'ny volavolan-drivotra antaradrana-onjam-peo hatramin'ny vokatra, dingana izay nandalo fiakarana sy fidinana marobe, nandalo lalan-kely maro. Andriamatoa Zhou Quentin, CEO an'ny Nanoradar Technology, dia nilaza fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny teknolojia sy ny fanitarana ny tsena i Nanoradar. Ny radara onjam-peo milimetatra 24GHz dia niseho tamin'ny famatsiana boky, mpanjifa mihoatra ny 150 amin'ny firenena 10 manerantany no mampiasa ny vokariny. Nasongadiny fa mbola misy tombony lehibe dia lehibe ny fanaovana radar milimetatra ao amin'ny firenena, dia ny fahatsapana ny fanaingoana ny algorithma sy ny pitsopitsony.
Tale Jeneralin'ny teknolojia Nanoradar Zhou Quentin
Teknolojia nanoradar ao amin'ny radara milimetatra 24GHz, inona avy ireo vokatra mahazatra? Inona no tena tsenany? Inona avy ireo fampiharana lehibe mahomby? Inona avy ireo tombony azo amin'ny fifaninanana sy drafitra fampandrosoana ho avy? Amin'ireto fanontaniana ireto dia nanadinadinana ny tale jeneralin'ny teknolojia Nanoradar Zhou Quentin ilay mpanao gazety.
Araka ny filazan'ny orinasan'ny fikarohana ao amin'ny tsena Plunkeet Research, tombanana fa amin'ny taona 2020, dia ho efa ho 70 tapitrisa ny rafitra radar-onjam-peo an-dranomasina manerantany amin'ny taona 2020, miaraka amin'ny CAGR manodidina ny 24% amin'ny 2015-2020. Ahoana ny hevitrao ny firoboroboan'ny radara onjampeo millimeter amin'ny tsenan'i China?
Zhou Quentin: Miorina amin'ny fikarohana radara onjampeo millimeter fiara nanomboka ny taona 1960, ny fandalinana dia tany Alemana, Etazonia, Japon ary firenena mandroso hafa indrindra. Amin'ny taonjato faha-21, rehefa mitombo ny filan'ny tsena fiara dia hanomboka hiroborobo izy ity. Amin'ny ankapobeny amin'ny tanibe, Hella, Bosch, Denso, Autoliv, Delphi sy ireo orinasa hafa, indrindra ny radara onjampeo milimetatra 77GHz, Bosch, Continental, Delphi, Denso, TRW, Fujitsu no mpamatsy lehibe indrindra eran-tany.
Taraiky ny fanombohan'ny mpamokatra ao an-trano, miaraka amin'ny fanokafana tsikelikely ny chips any ivelany aorian'ny 2013, niditra tao anatin'ny vanim-potoana fampandrosoana haingana ny firenena. Taorian'ny fampandrosoana efa-taona dia nisy ny zava-bita. Ohatra, China Automotive 24GHz vokatra fohy an'ny milimetatra-onja onjampeo Miorina amin'ny antontan'isa tsy feno, amin'ny taona 2017, ny fandefasana radara 24GHz ao an-toerana dia tombanana ho mihoatra ny 100,000. Rehefa mihena ny vidiny dia hitarina ny fizotran'ny fampiharana ary tombanana ho avo roa heny farafahakeliny ny fitomboana amin'ny taona 2018. Sinarin'ny onjam-milimetatra China 24GHz eny an-tsena no namaky lavaka teo amin'ny sehatry ny indostria koa dia manohana fahalavorariana, ireo mpanamboatra vahiny te-hanafika ny tsenan'ny radara-onjampeo Sinoa indray sarotra kokoa, telo taona eo ho eo, tena hanondro ny vidin'ny antsy Sinoa ho an'ireo mpanamboatra vahiny.
Ny teknolojia ifotoran'ny radar-onja milimetatra 77GHz dia ampihimokin'ny mpanamboatra vahiny amin'ny ankapobeny. Na dia efa manana prototypes aza ny mpanamboatra sinoa sasany, dia nisy ny fandrosoana vita tamin'ny teknolojia. Na izany aza, mbola maro ny fomba handehanana amin'ny famokarana. Mandritra ny fotoana maharitra, ny radara onjam-peo milimetatra 24GHz dia efa manana fototra matanjaka ao Shina ary arahana ny politikany. Ny kinova C-NCAP vaovao dia misy ny AEB. Eo ambanin'ny tsindry roa, ny famokarana vokatra 77GHz dia fotoana fohy ihany.
Raha ny fahitana ny sehatry ny indostrialy, ny fampitoviana an-tokantrano voalohany dia afaka mahazo fantsom-pandrefesana avo lenta any ivelany, ny firenena vahiny dia nisokatra bebe kokoa ho an'ny ao an-trano, raha misy mpanamboatra chip an-trano maromaro nanomboka nanery, toy ny tsipika Xiamen imsemi, ny ankehitriny Tena tsara ny puce 24GHz hatao. Amin'ny fototry ny teknolojia fanodinana, indrindra ny 24GHz dia efa matotra tokoa, ny elanelana tokana dia ny fizotry ny famolavolana ny vokatra, ny fotoana maharitra fotoana fohy hanangonana, mbola misy toerana azo hatsaraina, amin'ny alàlan'ny fitsapana sy fanatsarana maro be, ny banga lasa kely kokoa sy mihakely.
Ao amin'ny tsenan'ny radara 24GHz, azafady ampidiro ny vokatra mahazatra an'ny vokatra teknolojia Nanoradar? Inona avy ireo tombony lehibe mifaninana amin'ireo vokatra ireo raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana aminy?
Zhou Quentin: radara onjam-peo milimetatra 24GHz, ampiasaina matetika ao amin'ny BSD, LCA, RCTA, EAF, FCTA, radarin'ny onjam-peo milimetatra 77GHz no lohalaharana mankany amin'ny làlan'ny fiara, izay ampiasaina amin'ny rafitra ACC, AEB. Raha ny fijerin'ny fampiasana azy dia mora kokoa ny mampanjohy kalitao 24GHz, sarotra kokoa ny 77GHz.
Nanoradar arakaraka ny fangatahana tsena isan-karazany amin'ny vokatra samy hafa, sokajy enina lehibe amin'ny vokatra 17, ny vokatra dia mifantoka amin'ny sokajy lehibe efatra amin'ny tsena, tsena fandriam-pahalemana, tsenan'ny fiara mandeha fiara, sidina UAV, tsenan-tsolika artifisialy, samy manana ny mampiavaka azy ny tsena tsirairay. fananana vokatra.
1, tsena fiarovana marani-tsaina, toetra ilain'ny fangatahana: halavirana lava, zoro malalaka, kendrena miadana ambany. Nanoradar Technology dia nandefa ny haben'ny detection NSR300W mirefy 450 metatra amboniny, fa koa ny tsena fiarovana manerantany hamantarana ny iray amin'ireo radara 24GHz lavitra indrindra.
2 、 ny tsenan-tahiry fiara, ny ifantohan'ny fikarakarana famantarana sarotra eo ambanin'ny sehatra, mba hanilihana ny korontana amin'ny radara, noho izany tsy ny fiheverana diso, ny fanesorana, ny vidiny dia tsy maintsy mifaninana, ny vidin'ny CAR28T amin'izao fotoana izao dia tratra noho ny fifaninanana radar vahiny, mamelana tanteraka ao anaty fiara rehefa avy mivarotra sy fiara manokana.
3, tsena UAV, NRA24 miaraka amin'ny fampisehoana marin-toerana sy azo antoka eo amin'ny sehatry ny fiarovana zavamaniry UAV nibodo ny antsasaky ny tontolo iainana dia afaka mizatra amin'ny asan'ny fiarovana ny zavamaniry, hihaona amin'ny fisorohana sakana tsy mitombina 30 metatra, tany mirefy 50 metatra hanaraka.
"Ny vokatra radar 24GHz sy ny 77GHz dia tsy mifanilika." Ny haitao tery 24GHz dia tsy voafehy ary azo ampiasaina amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny tombony amin'ny vidin'ity teknolojia ity dia tombony lehibe ihany koa ho an'ny fiara kely Aiza ianao. "
Inona avy ireo tranga fampiharana mahomby indrindra amin'ny vokatra radara onjam-peo Nanoradar? Inona ny fiarahan'ny mpanjifa manerantany?
Zhou Quentin: ny vokatra radara nanoradar dia ampiasain'ny mpanjifa mihoatra ny 150 + amin'ny firenena 10 manerantany. Ny tranga mpanjifa dia mandrakotra ny tsenan'ny fiarovana marani-tsaina, ny tsenan-tsolika fiara, ny sidina fanampiana UAV ary ny tsenan-tsolika artifisialy.
Sambo programa tsy miankina amin'ny sambo 1 + N radar:
1. Araka ny antontan'isa iray, 89% -96% amin'ireo lozam-pifamoivoizana an-tsambo dia azo lazaina ho antony manokana, ao anatin'izany ny antony mazava sy mety hitranga. Ny fomba hamahana amin'ny fomba mahomby ny olan'ny fisorohana sakana tsy lavitra olona dia olana lehibe manerantany.
2, teknolojia Nanoradar Millimeter radar anti-collision solution: 1 + N (SP70C) radarine-onjam-peo, radar-onja milimetatra lavareny ary radar milimetatra-onja midadry-range, elanelana lavitra dia afaka misafidy 100 metatra ka hatramin'ny 450 metatra halaviran-davitra hahatratra ny fisorohana ny fifandonana, araka ny velaran'ny faritra sy ny haben'ny sambo, arakaraka ny tena zava-misy hisafidianana radar-onja milimetatra elanelana elanelana hahatratra 360 ° fiarovana amin'ny faran'ny maty.
Ny rafitra fanoherana fifandonana tsy miankina amin'ny olona miorina amin'ny radar milimetatra dia mandray ny rafitra FMCW, izay afaka mandrefy ny halavirana, ny hafainganana ary ny zoro kendrena ary manana fahaiza-manafoana onja. Vahaolana tsara ho an'ity olana sarotra ity ny fisorohana ny sakana tsy misy mpitantana. Amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 5 ny mpanamboatra sambo tsy an'asa mampiasa ity programa ity.
Inona avy ireo tombony azon'ny orinasanao hisarihana ny sain'ny mpampiasa vola? Inona ny drafitra fampandrosoana ho avy?
Zhou Quentin: ny teknolojia Nanoradar no hazondamosin'ny mpanamboatra radara-onjam-peo ao Shina. Izy io dia nanao fikarohana lalina tamin'ny faritra toy ny radar milimetatra sy ny antennas marani-tsaina. Tetikasa 3 no novatsian'ny governemanta vola amin'ny ambaratonga rehetra ary nangataka patanty famoronana 9 izy. Nanoradar Technology dia nahomby tamin'ny famokarana vokatra radar-onja 17 milimetatra, ary vokatra 4 na mihoatra hahatratrarana ny varotra, hahatratra telo heny mihoatra ny telo isan-taona ny fivoaran'ny vokatra, ny 1T1R, 1T2R, 1T4R, 2T4R ary koa ny T sy ny hafa R system 8 vokatra radara.
Araka ny tranga fampiharana hafa, ny elanelana misy eo amin'ny olona manadihady dia mety hahatratra 300 metatra amin'izao fotoana izao, ny maha-marina ny zoro fandrefesana dia tsara kokoa noho ny 1 °, ary ny marim-pototra manodidina dia tsara kokoa noho ny 0.3 metatra. Ho an'ny fitsapana fiara, hatramin'ny 500 metatra ny fahitana, ny marina hafainganam-pandeha tsara noho ny 0.1m / s.
Ny teknolojia radimeter-onja radar mandray ny rafitra MIMO dia làlana manan-danja amin'ny vokatra ho avy. Ny rafitra radar MIMO dia afaka mampiasa tanteraka ny tombony azo amin'ny volo virtoaly ary manatsara be ny refy fandrefesana ny zoro, izay misy dikany lehibe amin'ny sehatry ny radar automotive. Amin'ny sehatry ny radara mandeha amin'ny fiara dia sarotra be ny tontolo iainana amin'ny lalana. Ny ekipanay dia nitazona ny ambaratonga avo lenta eo amin'ny sehatry ny teknolojia radar MIMO ary afaka mitana haingana ny haavon'ny haavo teknolojia. Radar no mitarika ny fampidirana ny teknolojian'ny fahaizana artifisialy hanatsarana ny taham-pitsikilovana sy hampihenana ny fanairana diso amin'ny alàlan'ny fianarana samirery mba hahatratrarana ny zoro ary hamaky ny sakana amin'ny teknolojia mpamokatra vahiny.
PREV: Fampisehoana Shenzhen Security: fampiharana radar amin'ny milina vaovao
MANARAKA : Engine motera Altimeter】 Nanoradar navotsotra: CAN interface ny UAV altimeter milimetatra-radio radara